From .. Kaung ma lay – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	From .. Kaung ma lay
← အချစ်စစ် ၊ ကိုနွယ်ရိုး နှင့် ZOXcarrefour ကအကြောင်း →
One comment on “From .. Kaung ma lay”	NweYoe says:	May 19, 2009 at 9:43 pm	၀ူး……….. မိုက်တယ်ကွာ၊ အားကျမိ၏။ တချို့နေရာလေးတွေ တူသဗျာ၊ စာလေးတွေ ရေးပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့။ အနော့်ကိုဆိုရင် တနေ့ကို တရွက်ဖတ်ရမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ စာကြောင်းလေးတွေ ရေးပေးလိုက်ပါသတဲ့။